२०६० सालतिर म पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विज्ञान संकायको तेस्रो वर्षमा अध्यनरत थिएँ, जीव विज्ञानको विद्यार्थीका रुपमा। ल्याबोरोटरीमा प्राक्टिकल क्लासका लागि छिर्दा सिसाको बोत्तलहरूभित्र फरमलडिहाइड र अन्य रसायनभित्र डुबाएर राखिएका चराहरू, सरिश्रृप, पुतली र अन्य जीवजन्तुहरूले मलाई तर्साइरहन्थे। म शाकाहारी पनि थिएँ। गँड्यौलाको डाइसेक्सनसम्म त्यती गाह्रो थिएन, किनकि हामीले खेतमा गँड्यौलाको हत्या र दाहसंस्कार कति ग¥यौं कति! तर, त्यही जाबो गँड्यौलालाई चिरेर भित्रि अंगहरूको अध्धयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइएस्सी पहिलो वर्षमा मात्र थाहा पाइएको थियो। त्यसपछि साङ्ले किरा र भ्यागुतो काटियो। म खुसी थिएँ कि, मैले खरायो र मुसा काट्नु परेन। तेस्रो वर्षमा हामीले केही पुतलीहरूलाई छोप्नु थियो। अन्तिम परिक्षामा त्यसको पनि नम्बर जोडिन्थ्यो। पुतलीलाई छोपेर जिउँदै ल्याउन पाएको भए पनि रमाइलै हुन्थ्यो। तर, सरहरूले पुतलीलाई जालीभित्र कसरी पार्ने भन्ने सिकाए। हलुका गरी पुतलीको टाउकोमा अँठ्याएर पुतलीलाई कसरी बेहोस बनाउने भनेर सिकाए। त्यसपछि काठ मेसिनमा गएर बनाउन लगाएको काठ र सिसाको फ्रेमको पिँधमा ठोकिएको प्लाइबोर्डमाथि ओछ्याइएको फममा पुतलीलाई राखिन्थ्यो र माथि पुतलीको शरीरको माझबाट पिन गाडिन्थ्यो। त्यसपछि ती पुतलीहरू कहिल्यै उडेनन्। मलाई निकै सकस हुन्थ्यो। म आफैंलाई सोधिरहन्थेँ, के यसो गर्नु आवश्यक छ?
‘बालाई उड्दै गरेका चराहरू मन पर्दैनन्र, पनि बाकै तालुमा बिस्ट्याउँदै चराहरू उडिरहेकै छन्।
बालाई लाग्छ यिनै चराहरूले भनिदिए होलान् उडेपछि आकाश अझै फराकिलो देखिन्छ।
बा बर्बराइरहन्छन् यी चराहरूले किन सन्तानहरूलाई फर्किन सिकाएनन्?’
शनिबार, बैशाख ३०, २०७४ १५:१५:४९